Wafdigii dowladda iyo Saraakiisha Ciidamada Gadoodsan oo kulan xasaasi ah yeeshay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wafdigii dowladda iyo Saraakiisha Ciidamada Gadoodsan oo kulan xasaasi ah yeeshay
Guddigii ka koobnaa Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Soomaaliya oo uu wehliyo Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa ay xalay kulamo xasaasi ah degmada Balcad kula qaateen saraakiisha hoggaamineysa Ciidamadii ka soo baxay furumaha dagaalka ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, Wasiirka Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle iyo Abaanduulaha Ciidamada Odawaa Yuusuf Raage iyo saraakiisha ciidamada gadoodsanaa ayaa markii hore kulankooda waxa uu ka dhacay xeradii hore ee Ciidanka Hiilweyne ayaa markii dambe loo wareejiyey dhinaca Warshadii hore ee dharka Balcad,waxaana Guddiga ay saraakiisha kala hadleen sidii Ciidamadaas dib ugu laaban lahaayeen Xarumihii ay soo baneeyeen.
Guddiga ayaa aad u adkaatay inay ku qanciyaan Ciidamada dib ugu laabashada goobihii ay soo baneeyeen, iyada oo aan laga qancin waxyaabihi keenay, hayeeshee markii dambe lagu qanciyey inay dib ugu laabtaan.
Wararka aan saakay ka heleyno Balcad ayaa waxaa ay sheegayaan in kulankii labada dhinac ay isku-afgarteen in Ciidamada dib loogu celiyo Saldhigyadii ay kasoo baxeen,isla markaana xaquuqdii ay lahaayeen ayu bixin doonto Dowladda Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale saakay Balcad ka socda diyaar garoow ku aadan Ciidamada oo doonaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay askoo baxeen sida, Garoonka diyaaradaha Jowhar, deegaanka Qalimow, degmada Mahadaay iyo deegaano kale.
DFS oo sheegtay iney dishay Xubno ka tirsan Shabaab